Wax soo saarka duulista Hindiya: Waqtiga looga guurayo hiddo-wadaha loona gudbo waxyaabaha gaarka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Wax soo saarka duulista Hindiya: Waqtiga looga guurayo hiddo-wadaha loona gudbo waxyaabaha gaarka ah
Aviation • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
wax soo saarka aerospace
Hindiya waxay eegaysaa inay xoojiso warshadaha duulimaadka iyada oo loo marayo wax soo saarka aerospace. Maaddaama diyaaradaha ay u baahan yihiin in la dayactiro oo la dayactiro, warshadani waxay u kori kartaa si isdaba-joog ah maaddaama waddanku horeyba u arkay koritaanka xooggan ee aaggan. Duulimaadyada madaniga ahi waxay u soo baxayaan sidii mashiin horumarineed waxayna Hindiya dooneysaa inay ku jirto radar soo saarista duulimaadyada qof walba.
Hindiya waxay ka shaqeyneysaa inay kobciso doorkeeda ku aaddan waaxda soo saarista duulista, taas oo lagu caddeeyay waraaqaha lagu soo bandhigay munaasabad lagu qabtay magaalada Delhi maanta oo ay taariikhdu tahay Janaayo 7, 2021.
Mudane Pradeep Singh Kharola, Xoghayaha, Wasaaradda Duulista Hawada, Dowladda Hindiya, ayaa maanta sheegtay in dowlad goboleedyada ay tahay inay door muhiim ah ka ciyaaraan wax soo saarka aerospace. Siyaasadaha gobolka ee ku saabsan maalgashiga, canshuuraha, iyo shaqada ayaa soo jiita unugyada wax soosaarka ee ka kala yimaada dalka oo dhan.
Isaga oo ka hadlaya Aero India 2021- 13th Bandhigga Caalamiga ah ee Sannadlaha ah & Shirka “Samaynta Hindiya Isku-kalsoonaanta Warshadaha Aerospace, ”oo ay soo qabanqaabiyeen Xiriirka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Hindiya (FICCI) iyo Wasaaradda Duulista, Mudane Kharola wuxuu sheegay in hadda la joogo xilligii laga gudbi lahaa hiddo-wadaha loona gudbi lahaa waxyaabaha gaarka ah illaa iyo inta laga hadlayo aerospace Drones waa qayb muhiim ah oo ka mid ah warshadaha aerospace. Dhallinyarada ganacsatada ah ayaa ka faa'iideysan kara dib-u-habeeynta kala duwan ee ay dowladdu keeneyso, ayuu yidhi.
Mudane Kharola wuxuu yiri warshadaha aerospace waxay udhaxeeyaan R&D iyo naqshadeynta, ilaa wax soosaarka, ilaa MRO. "MRO (Dayactirka, Dayactirka, Dayactirka) waa warshad curdin ah, waxaanan ka shaqeyneynaa sidii looga dhigi lahaa mid firfircoon oo waarta iyo in la hubiyo in Hindiya ay u soo baxdo xarunta MRO ee gobolka," ayuu raaciyay.
Isaga oo sii faahfaahinaya, Mudane Kharola waxa uu sheegay in cirka oo si xawli ah u sii kordhaya, inta badan diyaaradaha loo baahan yahay in dibedda loo diro si loo dayactiro loona dayactiro. “Kani waa miraha ugu hooseeya ee laalaada oo loo baahan yahay in la gurto. Waxaan ka shaqeyneynaa dib-u-habeyn gaar ah - siyaasadaha canshuuraha waa macquul. Natiijo ahaan, MRO-yadayada waxay ku sugan yihiin garoon siman, ”ayuu raaciyay.
Mudane Kharola wuxuu sheegay in wax soosaarka loo maleynayay inuu yahay qeyb gaar ah oo ka mid ah waaxda dowliga ah, haatan ay heystaan ​​ciyaartoy gaar loo leeyahay oo u soo guuraya India una soo weecinaya waaxda wax soo saarka. Tani waa qayb u baahan in la sii xoojiyo, waana tan qaybta koritaanka dhabta ahi ka imaan doono. Waxay u kori kartaa si taariikhi ah, ayuu yidhi.
Waxaan leenahay shuruud difaac oo weyn - siyaasada isugeynta difaaca taas oo jawi wanaagsan loo abuuray maalgashiga laga sameeyo Hindiya, shuruuddanna ay sii kordheyso. "Waxaan u baahanahay inaan la fariisanno daneeyeyaasha isla markaana ogaanno fursadaha si loo helo is-waafajinta loo baahan yahay si loo joogteeyo waaxda aerospace," ayuu yiri.
Ms. Sumita Dawra, Xogheyaha Dheeraadka ah, Waaxda Horumarinta Warshadaha iyo Ganacsiga Gudaha, Dowladda India, ayaa sheegtay in warshadaha duulista Hindiya ay goob joog u ahaayeen koror xoog leh sanadihii la soo dhaafay. Waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa isku xirka Hindida geesaha fog ee dalka. “Warshadaha duulimaadyada rayidka ee Hindiya waxay noqdeen mid ka mid ah suuqyada duulimaadyada adduunka ugu macaashka badan. Waxaa jira fursado aad u ballaaran oo ku saabsan warshadaha duulista hawada ee maalgashiga. Adduunku wuxuu diiradda saarayaa duulimaadyada Hindiya iyo fursadaha ganacsi - laga soo bilaabo soosaarayaasha, guddiyada dalxiiska, iyo ganacsiyada adduunka, ”ayay tiri.
Marwo Dawra ayaa sheegtay in Hindiya ay u baahan doonto khariidad si kor loogu qaado wax soo saarka qaybaha muhiimka ah. “Hindiya waxay u furan tahay inay iskaashi la sameyso soosaarayaasha adduunka hoostooda 'Make in India' waxayna noqon doontaa lamaane muhiim u ah silsiladda wax soo saarka aerospace. DPIIT waxay sidoo kale ka shaqeyneysay abuurista nidaam daaqad keli ah oo heer qaran ah oo la qorsheeyay in la bilaabo bartamaha Abriil 2021, taas oo noqon doonta meel ay isugu yimaadaan nadiifinta maalgashadayaasha. Waxaan sidoo kale isla meel dhignay oo aan bilownay bangiga dhulka ee GIS karti u leh kaas oo hadda ku jira qeybta dadweynaha, ”ayay raacisay.
"Waxaan sidoo kale qaadnay layli aan ku qiimeynayno jardiinooyinka warshadaha ee dalka si aan ugu fududeyno maalgashadayaasha sameynta dookhyadooda maalgashi," ayay tiri Marwo Dawra.
Mr. Amber Dubey, Xoghayaha Wadajirka ah ee Wasaaradda Duulista Hawada, Dowladda Hindiya, wuxuu sheegay in Hindiya ay qasab ku tahay inay soo saarto radar shirkad kasta. Shirkadaha ajaanibta ah waxay imaan doonaan oo kaliya markay helaan suuq macquul ah oo ay Hindiya u adeegsadaan barxad wax soosaar iyo dhoofinta. Riyadeenu ma ahan inay noqoto inaan ka dhigno Hindiya kaalinta tobnaad ee ugu weyn adduunka laakiin waxay ka mid tahay saddexda xulasho ee ugu sarreysa ee ay leeyihiin (soosaarayaasha shisheeye), ”ayuu yiri.
Mudane Dubey wuxuu sii raaciyay inay jirto wax weyn oo miyir qab ah oo aanaan mar dambe ka noqon doonin qaran wax iibsada iyo kuwa wax soo dejiya. "Hindidu waa dad fiiqan oo nuugi kara tiknoolajiyad kasta, waxaanan eegeynaa koritaan shaqo ka buuxay ee ma ahan koritaanka shaqo la'aanta," ayuu raaciyay.
Ms. Usha Padhee, Xoghayaha Wadajirka ah ee Wasaaradda Duulista Hawada, Dowladda Hindiya, ayaa sheegtay in duulimaadyada rayidka qeyb ahaan ay u soo baxday matoor horumarineed. "Adduunweynaha, duulimaadyada rayidka ah waxay ku socdaan waddo soo kabasho iyo qaran ahaanba, waaxdan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraysa sidii loo gaari lahaa himilada dhaqaalaha 5ta bilyan ee doollar ee dalka." Qeybta duulista ayaa muujisay geesinimadeeda iyo adkeysigeeda dib u soo kabashada, ayay tiri.
Dheeraad ah, Ms. Padhee waxay sheegtay in ay tahay mas'uuliyadda dowladda in la abuuro nidaam deegaan oo ganacsiga gaarka loo leeyahay uu ku koro. "Dawladdu waxay waday qorshayaal ay ku fududaynayso fududeynta ganacsiga, dhisida nidaamka deegaanka, iyo inay u furto adeegyo maaliyadeed qorshooyin kala duwan oo buuxin kara buuxinta wax soo saarka duulimaadyada," ayay raacisay.
Mudane Remi Maillard, Gudoomiyaha, FICCI - Gudiga Duulista Rayidka, iyo Madaxweynaha & MD, Airbus India, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardar galiyo isbadalka Hindiya oo ah xarun wax soo saar iyo dardar galinta isbedelka qaanuunka.
“Waa wax lagu farxo in la arko shirkadaha Hindida ah oo ku guuleysanaya karti lagu amaani karo dhammaan dhinacyada wax soo saarka aerospace. 'Sameynta Hindiya' Atmanirbhar ee soo saarista aerospace macnaheedu maaha awoodaha nuqul-dhajinta ee horeyba uga jiray meelo kale. Waa inaan ka faa'iideysanaa awoodda ballaaran ee waddanka iyo hibada hibada si aan ugu boodno tikniyoolajiyadda mustaqbalka. Hamiga waa inuu noqdaa mid awood u siinaya India inay kaalin firfircoon ka qaadato horumarinta jiilka soo socda, ”ayuu yiri.
Marwo Ashmita Sethi, Gudoomiyaha, FICCI Gudiga Duulista Rayidka, iyo Madaxweynaha & Madaxa Dalka, Pratt & Whitney India, waxay sharaxaad ka bixiyeen kor u qaadida tartanka aerospace iyo nidaamka bey'ada difaaca ee Hindiya, muuqaalka hada jira, caqabadaha, iyo wadada loo socdo.
Mr. Parag Wadhawan, Agaasimaha Maamulka, Collins Aerospace India; Mr. Mihir Kanti Mishra, Maareeyaha Guud, Aerospace Division, Hindustan Aeronautics Limited; Mr. Ankit Mehta, Aasaasaha & Agaasimaha Guud, Idea Forge; Dr. RK Tyagi, Gudoomiyaha, FICCI General Aviation Taskforce, iyo Gudoomiyihii hore, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) iyo Pawan Hans Limited (PHHL) waxay soo bandhigeen aragtidooda.